Ungaya nini e-Iceland: Ubuhle kunoma iyiphi isizini | Izindaba Zokuhamba
Ungavakashela nini e-Iceland?
Luis Martinez | | Amathiphu, Islandia
Uma uzibuza nini ukuya e-Iceland, into yokuqala okufanele uyikhumbule isimo sezulu yalelozwe. Iwuhlobo lwe-climatology i-oceanic subpolar, ehlobo elipholile nelifushane kanye nobusika obubandayo. Kodwa-ke, lezi zamuva azinawo ukhahlo njengoba ungase ucabange uma ubheka indawo yase-Iceland. Imiphumela ye umfudlana we-gulf ofudumele nciphisa amakhaza.
Ngakolunye uhlangothi, isimo sezulu sayo sinesibopho sezimangaliso zemvelo izwe laseNordic elikunikeza ngazo, ngazo izinguzunga zeqhwa ezimangalisayo nemifula eyiqhwa. Uma kulokhu wengeza okubekayo izintaba-mlilo, uzoqonda ukuthi enye yezinto ezikhangayo e-Iceland imvelo yayo. Noma kunjalo, noma nini kuhle ukuvakashela lawo mazwe. Ngakho-ke, ngaphezu kokuchaza isikhathi sokuya e-Iceland, sizophakamisa ukuthi yini okufanele yenziwe ezweni phakathi nenkathi ngayinye yonyaka.
1 Hamba uye e-Iceland ebusika
2 Ihlobo, isincomo esihle kakhulu sokuthi ungaya nini ukuya e-Iceland
2.1 I-Reykjavik, nganoma yisiphi isikhathi sonyaka
3 Hamba uye e-Iceland entwasahlobo noma ekwindla
Hamba uye e-Iceland ebusika
I-Northern Lights emangalisayo
Uma ungenandaba namakhaza, ungavakashela izwe laseNordic ebusika. Njengoba besisho, amazinga okushisa awehlile njengakwamanye amazwe ane-latitude nobude obufanayo. Ngokwesibonelo, ENorway o I-Suecia. Isizathu siwukuthi ugu lwalo olusentshonalanga naseningizimu lugezwa yi-Gulf Stream okukhulunywe ngayo ngenhla, evela eCaribbean, kodwa kukhona enye.
I-Iceland ihlezi kwenye yezindawo ezishisa izikhotha emhlabeni. Ine-a umsebenzi omkhulu we-geothermal, enezintaba-mlilo eziningi, iziphethu ezishisayo namagiza. Kodwa, naphezu kwakho konke lokhu, ungalindeli ukuqeda amakhaza ebusika.
Reykjavik, inhloko-dolobha yezwe, inezinga lokushisa elivamile enkathini ebandayo ye-degree Celsius eyodwa noma amabili ngaphezu kweqanda, nakuba lingafinyelela ku-negative ten. Futhi, indawo esentshonalanga ihlukaniswe iqhwa kalula. Kunoma yikuphi, isimo sezulu sase-Icelandic siyashintshashintsha kakhulu. Eqinisweni, kukhona inkulumo phakathi kwezakhamuzi zezwe ethi uma ungathandi isimo sezulu, linda imizuzu emihlanu. Shintshela ku.
Ngakolunye uhlangothi, ubusika buyisikhathi esingcono kakhulu sokuthi ujabulele ezinye zezinto ezikhangayo zase-Iceland. Yindaba yabadumile I-Aurora borealis. Ziyabonakala kuso sonke isiqhingi, ngisho naseReykjavík. Kodwa kunezindawo zemvelo ezingcono ukubuka lesi simangaliso.
Izibani zasenyakatho zivela enyakatho. Ngakho-ke, leyo ndawo yase-Iceland ifaneleka kakhulu ukuyibona kubo bonke ubukhazikhazi bayo. Ngokucacile, kunezindawo ezimbalwa okuthi, ngaphezu kokukuvumela ukuthi uzibone, zinhle ngempela. Kuyindaba ye- intaba ye-kirkjufell, enye yezindawo ezidume kakhulu kwezokuvakasha.
Ingamamitha angu-463 kuphela ukuphakama, inesici esithakazelisayo se-conical futhi ohlangothini lwayo kunempophoma enhle. Uma ungeza izibani zasenyakatho kukho konke lokhu, uzoba neqoqo lendawo efana nephupho. Futhi okuzungezile Hvitsekur Baphelele ekucabangeni lesi sigameko. Kuyi-outcrop enamadwala eyingqayizivele efana nokuphuza kukadrako.
Ngamafuphi, kunezindawo eziningi ezinhle zokubona izibani zaseNyakatho. Kodwa sizophinde sikhulume I-Skardsviti lighthouse, indawo eyedwa lapho uzozithola uvumelana ngokugcwele nemvelo futhi uzojabulela umbono walesi simo njengakwezinye izindawo ezimbalwa.
Ngakolunye uhlangothi, ungasebenzisa futhi ithuba lokuvakashela kwakho e-Iceland ebusika ukuze wazi eningizimu yesiqhingi, isimo sayo sezulu esithambile kunesasenyakatho. Ngakho ungavakashela i- I-Glacier ye-Vatnajökull, elikhulu kunawo wonke kulo lonke elaseYurophu; emangalisayo Impophoma ye-Gullfoss, cishe amamitha ayikhulu ububanzi namashumi amathathu ukushona; i i-geysir, igiza elikhulu noma i Amathafa aseThingvellir noma iPhalamende, elibheke amachibi amangalisayo.
Kodwa ungavakashela namadolobha aseningizimu njengeReykjavík uqobo, esizokhuluma ngayo kamuva, I-Kópavogur, lapho kunomnyuziyamu womlando wemvelo othakazelisayo, noma I-Hafnarfjordur, lapho ungavakashela khona isonto laseSan José, kodwa ngaphezu kwakho konke ukuya endaweni engavamile umkhosi we-viking olugujwa minyaka yonke.
Ihlobo, isincomo esihle kakhulu sokuthi ungaya nini ukuya e-Iceland
Naphezu kwakho konke esikutshele khona kuze kube manje mayelana nesikhathi sokuya e-Iceland, isikhathi esingcono kakhulu ihlobo. Amazinga okushisa ayathandeka kakhulu, kanti ama-avareji angaba ngama-degree centigrade ayishumi nambili, nakuba angafinyelela amashumi amabili nanhlanu kuye ngendawo yezwe.
Ungabona futhi Izibani ZaseNyakatho futhi uvakashele izindawo ezinezintaba nezisenyakatho okunzima kakhulu ukuzibona esimweni sezulu esingesihle. Isibonelo, amadolobhana amancane okudoba agcina izici zendabuko zasemaphandleni ase-Iceland.
Kuyiqiniso I-Husavik, ebhekwa njengenye yezindawo ezinhle kakhulu emhlabeni ongabuka kuzo imikhomo, eza ethekwini laseSkjálfandi ukuze izophakela. Abalandeli be-Ornithology nabo bangajabulela leli dolobha elinabantu abacishe babe yizinkulungwane ezimbili, ngoba ehlobo ama-puffin awaningi.
Elinye idolobhana elincane elifanelwe ukuvakashelwa nguwe Siglufjordur, enhlonhlweni yaseTrollaskagi, enendlu yayo yamapulangwe enomlando ependwe ngemibala egqamile. Ngaphezu kwalokho, ineMnyuziyamu eyingqayizivele ye-Herring Era, ukudoba kwayo kwakuwukuphila kwezakhamuzi zakhona kuze kube muva nje.
Okubaluleke nakakhulu idolobha U-Aureyri okuyinto, naphezu kokuba nezakhamuzi eziyizinkulungwane ezingamashumi amabili kuphela, ibhekwa njengenhloko-dolobha enyakatho yezwe. Izungezwe yizintaba entshonalanga kokumangalisayo Eyjafjour Fjord nasogwini lwe Umfula iGlera. Kwakuyindawo yamaViking endala lapho ukuhlonishwa kwayo kukhokhwa khona namuhla ngesithombe unkulunkulu thor. Ungavakashela futhi umbukwane wayo isonto kanye nalo Ingadi Yezitshalo. Kodwa, njengoba sikhuluma ngamadolobha ase-Iceland, sekuyisikhathi sokuchaza ukuthi yini ongayibona eReykjavík, inhloko-dolobha yezwe.
I-Reykjavik, nganoma yisiphi isikhathi sonyaka
Ngoba idolobha elikhulu lase-Icelandic lingavakashelwa nganoma yisiphi isikhathi. Kodwa, uma ufuna ukubona zonke izikhumbuzo zayo, kungcono ngaso sonke isikhathi ukuya ehlobo, lapho amazinga okushisa ekusiza ukuthi uchithe isikhathi esiningi emigwaqweni. Njengoba inabantu abangaphansi kwezinkulungwane ezingamakhulu amabili, inokuningi ongakunikeza yona.
Ungaqala uhambo lwakho lwezakhiwo ze- iPhalamende futhi we indlu kahulumeni, kokubili kusukela ekhulwini le-XNUMX. Eduze kakhulu nalezi, esifundeni esifanayo saseMiöborg, kukhona Ilabhulali futhi i Inkundla yaseshashalazini kaZwelonke. Kufanele futhi uvakashele i- I-National Museum yase-Iceland futhi i indlu ye-nordic, umsebenzi womdwebi wezakhiwo Alvar Aalto.
Kodwa, uma ufuna ukwazi iReykjavík yendabuko kakhulu, ngaphezu kwedolobha elidala, kufanele uvakashele I-Arbaer Folk Museum, lapho ungabona khona idolobhana lonke elakhiwe kabusha ngesitayela soqobo esimsulwa. Okokugcina, mayelana nezikhumbuzo zenkolo zedolobha, sikweluleka ukuthi ubone isonto lombhishobhi elidala, kusukela ngekhulu le-XNUMX, kanye I-Reykjavik Free Church. Kodwa, ngaphezu kwakho konke, okuhlaba umxhwele IHallgrímskirkja noma i-cathedral entsha, isakhiwo esihlaba umxhwele lapho uzobona khona isithombe saso U-Erik ObomvuItilosi laseNorway langekhulunyaka le-XNUMX elithole i-Iceland. Kodwa-ke, leli dolobha libuye libe nesonto elihle lamaKhatholika, elikaKristu iNkosi.
Hamba uye e-Iceland entwasahlobo noma ekwindla
Enye indawo ekhangayo yase-Icelandic, kulokhu indawo yaseVatnajokull ebusika
Mayelana nokuthi uzoya nini e-Iceland, ngisho nalezi zinkathi ezimbili zonyaka zihle ukukweluleka. Eqinisweni, ekubeni izivakashi ezincane kakhulu, amanani ashibhile futhi kukho kokubili okukodwa nakwenye ungabona futhi izibani zasenyakatho ezifiselekayo. Njengokungathi lokho akwanele, ikwindla ikunikeza umbukwane wemvelo wemibala ezintabeni nasemathafeni ngengxube yezitshalo, ubulembu nezinsalela ze-lava.
Amazinga okushisa afana kakhulu kuzo zombili izinkathi zonyaka, njengoba ehluka phakathi kukaziro kanye nama-degree centigrade ayishumi. Kuyiqiniso ukuthi izinsuku zabo azihambisani nezethu. Ikwindla e-Iceland iqala ngasekupheleni kuka-August futhi iphele ekuqaleni kukaNovemba. I-drawback yayo kuphela ukuthi i-a inkathi enomoya, okungenza uhambo lwakho lube nzima. Kufanele futhi ukhumbule ukuthi kukhona imisebenzi ephela ngalesi sikhathi. Ngokwesibonelo, yena kude emifuleni noma uhambo oluya ezindaweni eziphakeme kakhulu.
Ngakolunye uhlangothi, intwasahlobo yase-Icelandic ihamba phakathi kuka-April no-May. Nakuba abomdabu bezwe begubha usuku lokuqala lwehlobo ngo-Ephreli 18, ungakhohliswa. Kunalokho kuwukuqala kwentwasahlobo. Ngakolunye uhlangothi, kungase kube neqhwa ngezikhathi ezithile, kodwa akuvamile. Kunalokho, yisikhathi lapho izinyoni ezifudukayo ziqala ukubonakala. Njengelukuluku, sizokutshela ukuthi i-golden plover yaseYurophu ibhekwa njengokuletha intwasahlobo e-Iceland. Nokho, izinhlobo ezidume kakhulu ezifika kuleli lizwe i-puffin, esesikutshelile ngakho.
Sengiphetha, sithemba ukuthi siwuphendulile umbuzo wakho lapho ukuya e-Iceland. Njengoba sishilo, isikhathi esingcono kakhulu ehlobo. Kodwa futhi entwasahlobo nasekwindla kukulethela amazinga okushisa amnandi. Ngisho nobusika yisikhathi esihle sokuvakashela isiqhingi saseNordic. Ngoba kuyindlela engcono kakhulu yokubona okuyigugu I-Aurora borealis. Futhi, uhambo nokuhlala kushibhile futhi, uma uthanda izwe elineqhwa, yisikhathi esingcono kakhulu sokwazisa ubuhle beqhwa. izinguzunga zeqhwa nama-fjords, abangenamona ngalutho labo abavela eNorway. Ngakho-ke, vakashela i-Iceland noma nini lapho ufuna, kodwa ungayeki ukukwenza. Awucabangi ukuthi lezi esikunike zona ziyisizathu esanele sokuhamba?
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Ukuphunyuka eYurophu » Islandia » Ungavakashela nini e-Iceland?
Ukudla okuvamile kwase-Seville
Okufanele ukwenze eziQhingini zaseCíes